Libanona: Ny Zavakanto sy ny Mpanakanto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2017 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Português, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2007 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Manana fanampiny vitsivitsy vaovao ho an'ny zavakantony navoaka tao amin'ny bilaoginy i Suzanne Alaywan. Anisan'izany ity iray ity izay mivaky hoe “sarin'ny soritsoritra napetaka” ity. Mitondra ny fiainana sy fanantenana ho an'ny varavarankely antitra mihidy izany.
Mazen Kerbaj nandefa kisarisary vaovao maromaro tamin'ity volana ity. Ity iray ity dia mitondra ny lohateny hoe “boom” milaza ny tantaran'ny zava-niainan'i Evan tamin'ny fipoahana baomba- iray tamin'ireo fanafihan'ny mpampihorohoro nanamaloka ny andronay sy ny herinandronay vao haingana tao Libanona.
Nanampy ity dikateny amin'ny teny Anglisy ity tamin'ny lahatsoratra Arabo tamin'ny sariny izy.
mijery fahitalavitra aho
tapaka ny herinaratra
nihetsika ny tranobe
500 metatra ny trano
ary ny fanontanian'i Evan
– inona izany feo izany?
– inona izany setroka izany?
– fa misy inona?
taorian'ny 30 minitra
niverina tamin'ny laoniny ny zava-drehetra
ny hariva, fanontaniana vaovao:
– nahoana no tsy mikatona ny sekoly rahampitso?
Maroun Kassab niverina tamin'ny sasany amin'ireo hosodokony izay mandrafitra ny ampahan'ny fampiratiana. Ity ambany ity dia mitondra ny lohateny “tsindrimandry” sy menaka eo amin'ny lamba. Miteny ho azy ny sary.
Ity ambany ity kosa iray amind'ireo kisarisary vaovao sy mahaliana marobe avy amin'i Laure Ghourayeb. Nantsoiny hoe “l'autre” na “ny hafa” ity. Miteny ho azy ihany koa ity sanganasa ity.
Ibn Bint Jbeil nanoratra momba ny lohahevitry ny fampiratiana izay nandraisany anjara. Ny lohahevitra dia “ny Dia & Halavirana” ary mifantoka amin'ny hevitry ny olona tsy mitsahatra mivezivezy izany.
Nanazava ny hosodoko izy hoe:
Tamin'ny voalohany, tsy azo tsapain-tanana sy tsy nanana endrika ireo sary ireo, ka ny fitrandrahana ireo sary ireo dia fitrandrahana izany izay saro-takarina sy mora folahana. Noho izany, nanjary fanavahana an-tsaina ny trano sy ny tany ireo sary hosodoko ireo.
Afaka renesina ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy ihany koa ny mozika. Mpamoron-kira Libaney izay mitana ity bilaogy ity i Ziad El Ahmadie, bilaogy izay ahafahan'ireo mpitsidika mihaino ny mozikany sasany avy amin'ny kapila mangilatrany voalohany “Bilbel”, ankoatra ny lahatsary mozika.
Farany, misy ny bilaogy Lebanese Films izay iresahan'ireo mpanoratra, Libaney, momba ny hevitr'izy ireo manokana mikasika ny indostrian'ny horonantsary Libaney. Ao amin'ny lahatsoratra farany indrindra, miresaka ny sarimihetsika “S. L. Film ” ny mpanoratra, izay hatsikana mifototra amin'ny fandaharana efa nalaza tamin'ny fahitalavitra ” S. L. Shi “.